Maamulka Hirshabeele oo ku baaqay in la gargaaro dadka barakacay | Somsoon
Home WARAR Maamulka Hirshabeele oo ku baaqay in la gargaaro dadka barakacay
Maamulka Hirshabeele oo ku baaqay in la gargaaro dadka barakacay
Wasiirka Wasaarada Gargaarka iyo Maareeynta Masiibooyinka maamulka Hirshabelle Cabdi Mahad Qoorgaab oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaaa uu faahfaahin ka bixiyay dadkii ka barakacay deegaano ka tirsan gobalada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Wasiirka ayaa sheegay in Roobkii deyrta ee ugu xooga badnaa uu ka da’ay degmooyinka Baladweyne, Jowhar Buulo-Burde iyo deegaano kale, kaas oo reebay saameyn weyn.
Sidoo kale Wasaarada Gargaarka iyo Maareeynta Masiibooyinka Hir-Shabeelle ayaa sheegay in Hirshabeelle ay ku Barakaceen ilaa 450 kun oo Qaf,kuwaas oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo Roobabkii ka da’ay deegaannada Maamulkaas.
Wasiirka ayaa sidoo kale waxaa uu shaaca ka qaaday in roobka Deyrta ay 17kii Bishan October ay fatahaadda ka billaabatay Beledweyne taas oo sababtay in Magaalada ay ka barakacaan ku dhawaan nus Malyuun qof oo deggan.
Article horeDanjire Fiqi oo ka hadlay kiiska Badda iyo looyarrada difaacaya Soomaaliya
Article socoda Abiy Axmed oo Baarlamaanka hortagaya